राप्रपाले क-कसलाई कार्वाही गर्‍यो ? हेर्नुस् सुची — Samyantra.com
गृहपृष्ठ » मुख्य खबर → राप्रपाले क-कसलाई कार्वाही गर्‍यो ? हेर्नुस् सुची
राप्रपाले क-कसलाई कार्वाही गर्‍यो ? हेर्नुस् सुची
August 8, 2017१६९ पटक
काठमाण्डौँ – राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) ले ६ सांसद सहित १७ जना नेतालाई कारबाही गरेको छ ।
राप्रपा नेता पशुपति शमशेर राणाले आइतबार खोलेको नयाँ पार्टी राप्रपा प्रजातान्त्रिकमा जाने नेता तथा सांसदहरुलाई राप्रपाले साधारण सदस्य समेत नरहने गरि निश्काषनको कार्वाही गरेको छ ।
राणा संग १९ सांसद गएको बताईएपनी राप्रपाले भने ६ सांसदलाई मात्रै कारबाही गरेको छ । उसले दिपक बोहोरा, सुनिल थापा, रेशम लामा, विराज विष्ट, राज्यलक्ष्मी श्रेष्ठ र बविता मोक्तान लावतीलाई पार्टीको साधारण सदस्य समेत नहरने गरी कारबाही गरेको छ ।
यस्तै राप्रपाले नेताहरु हरिबहादुर बस्नेत, रामकृष्ण भट्टराई, पदमबहादुर बस्नेत, नवराज सुवेदी, विष्णुविक्रम थापा, गिरिधारी परियार, दिपककुमार राई, विन्दु पहाड, प्रदिप उदय र किरण गिरीलाई कारबाही गर्ने निर्णय गरेको छ ।